Tontolo Arabo: Midika Fahatezeran’Andriamanitra Amin’i Amerika Tsy Tokam-po i Sandy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Novambra 2012 4:10 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, Français, Magyar, македонски, srpski, English
Satria ao New York sy New Jersey avokoa ny mason’izao tontolo izao mba hanaraka ny vaovao momba ny tafio-drivotra Sandy, sy ny fahapotehana naterany, miadihevitra ny mponina maro manerana ny tontolo Arabo raha sazy noho ny fahatezeran’Andriamanitra no anton’ny tafio-drivotra – mba hamaizana ireo tsy tokam-po sy ho fanasaziana noho ny politika ivelany Amerikana. Tena matotra.
Nanontany I Abdulaziz Alhies hoe nahoana I Sandy no nanaitra ny maro raha namely ny morontsiraka Atsinanan’i Etazonia [ar]:
@azizAlhies: Namely an’I Jamaica, Haiti, Kiobà sy Dominikana ihany koa i Sandy .. sa tsy mahita afa-tsy Amerika ihany ny fo
Nahasarika olona kokoa ny fitantarana “kely” nataon’i Nizar Mohammed Othman momba ny tafio-drivotra Sandy, raha oharina amin’ny fahanginana manoloana ny habibiana natao tamin’ny mponina Syriana. Hoy izy nisioka:
@NizarAbdalla: Midera lehilahy namonjy alika nandritra ny tafio-drivotra izy ireo ary tsy te-ahalala amin’ny famonoan’i Assad ireo ankizy ao. Fitiavana biby ve izany?
Tao amin’ny Almoslim.net, Sheikh Naser Al Omar nandrisika ny mpamaky mba ho faly manoloana ny faharavana nateraky Sandy. Hoy izy nibilaogy:
Amerika no lehiben’ny tsy fahamarinana sy ny fampijaliana tamin’izany vanim-potoana izany. Ampiasainy hanaovany tsy rariny manerana izao tontolo izay ny vola nitahian'Andriamnitra azy. Maizina ny tantarany, amin’ny sehatra rehetra sy manerantany, indrindra raha mahakasika ny tontolo Islamika. Firenena mpamadika I Amerika, fahavalon’Andriamanitra sy ny mpaminaniny ary ny vahoaka Miozolomana. Nanimbazimba ny boky masina, ary nanitsakitsaka izany izy; akaikin’ny ratsy rehetra izy ary lavitry ny tsara rehetra; miaro ny fampihorohorona manerana izao tontolo izao izy
Iza no manohana an’i Israely?
Iza no miaro tsy an-kiato ireo Jiosy?
Iza no nandrava an’i Afganistana?
Iza no nandrava an’i Iraka?
Iza no naka ny haren’ny Miozolomana tao Atsinanana sy Andrefana ary roketa sy baomba ary nokleary no nasolony izany?
Al Omar nanohy hoe:
Lahatra sy sazy avy amin’Andriamanitra ny zava-mitranga ankehitriny ao Amerika noho ny fampijaliana, tsy fankatoavana ary ny tsy rariny sy ny famadihana an’Andriamanitra
Raha mahita ny tafio-drivotra mandravarava an’I Amerika sy ny firenena sasany ao aminy, fatantsika fa tso-drano avy amin’Andriamanitra izany,izay mendrika hisaorana sy hifaliana.
Tao amin’ny Twitter, nahitana fihetseham-po tahaka izany. Rakan naneho-hevitra hoe:
@Rakankov: Hitako fa tsy mahay mionona isika. Misy ireo olona manozona an’I Amerika manontolo ary ny hafa kosa mivavaka ho azy. Nahoana no tsy mivavaka amin’Andriamanitra mba hotahiany avokoa ny olona rehetra manoloana ny loza voajanahary?
Hoy I @OwaysKins nanohy:
@OwaysKins: Ireo faly manoloana ny tafio-drivotra Sandy dia manadino ny fahasamihafana eo amin’ireo olona tsy manan-tsiny iharan’ny loza sy ireo asa ataon’ny governemanta, izay mbola hijanona ao amin’ny Lapam-panjakana Trano Fotsy rehefa tapitra ny tafio-drivotra.
Kay, Sophisticated nanoratra hoe:
@k_a_world: Toe-tsaina mirefarefa amin’ny tany, faly amin’ny loza mihatra amin’ny hafa. Inona no idiran’ny fijalian’ny ankizy sy ny vahoaka tsy manantsiny amin’ny fanapahan-kevitra politika sy ny ady?
Ejypsiana Abdulgawad Mohammed nihantsy ady:
@abdelhawadmoha1: Manantena ny fihonganan’i Amerika aho, firenena mpampijaly izay manohana ny fampihorohoroana manerana izao tontolo izao, saingy matoky aho fa harovan’Andriamanitra ny tsy manan-tsiny amin’izao tafio-drivotra izao
@abdelhawadmoha1: Manohina ahy ny mahita ireo miahiahy ny amin’ny faharavan’i Amerika sy mivavaka mba hiarovana azy. Tsy mba mivavaka ho an’ireo Miozolomana enjehina ao Burma anefa izy ireo
Nandritra izany, Ejipsiana Nasry Esmat namehy hoe:
@nasry: Taorian’ireo fanehoan-kevitra tsy misy fotony, namaky lahatsoratra avy amin'ny Arabo momba ny tafio-drivotra Sandy aho, mino aho fa toerana tsara indrindra ho antsika ny boky maintin’ny tantara .. ary tsy noho ny fankahalana izany, fa noho ny tsy fahalalahana.